Akwụkwọ ngụcha maka ngwa maka ndị nkuzi 2021: 10 dị egwu ngwa ngwa maka ndị nkuzi: Akụkọ ụlọ akwụkwọ ugbu a
Ngwa Nhazi nke Ndị Nkuzi 2021: 10 Nnukwu Ngwuputa Ngwuputa Maka Ndị Nkụzi
gbara akwụkwọ Isiokwu by TMLTStaff na June 18, 2021
Nhazi nke Ndị Nkụzi: Mmụba nke teknụzụ mkpanaka akpalitela n'ezie nkuzi na nkuzi nkuzi a na-enwetụbeghị ụdị ya. Teknụzụ ndị a na-agagharị agagharị ebibiwo ókè, mepee ụzọ ndị ọhụrụ ha pụrụ isi mụta ihe, ma, nke kachasị mkpa, ha agbatịwo ohere mmụta iji tinye ohere dị ọcha.
Site na nke a na-abịa inwe mgbanwe yana oke oke mmiri gbasara ike nwa oge na-eme mmụta.
N'ihi ya, ọtụtụ ihe mmụta amụtala adị n'oge ọ bụla. Idozi ule, ihe omume na akwụkwọ na aka yiri ka ọ na-agwụ ike ma na-ewe oge. Gịnị ma ị were enyemaka site na teknụzụ?
N'isiokwu a, m ga-edepụta ụfọdụ ngwa grading dị egwu nke nwere ike inyere ndị nkuzi aka ịchekwa oge.
Grading App maka ndị nkuzi
1. Ngwa ngwa ngwa
Nke a bụ ihe mgbako na-enye aka iji nyere gị aka gbakọọ akara nyocha na ogo. 'QuickGrader bụ nkwalite dị ukwuu site na ndị na-agbakọ akwụkwọ grading ochie, nwere interface nwere ike ịhazi ya yana gụnyere atụmatụ niile dị ike achọrọ maka klaasị nke oge a tinyere ụkpụrụ ọkara.
Ọzọkwa, akpịrịkpa enwere ike idozi, gbakwunyere / mwepu grading, yana mmekọrịta enyi na enyi nke dị mfe na anya. Ngwa ngwa na-egbochi ihuenyo ka ikpuchi na-akpaghị aka, na-enye gị ohere ilekwasị anya na nhazi.
2. Onye Nkuzi Nkuzi
Ndị nkuzi a na-atụ aro ngwa a, ọ dịkwa mfe ịhụ ihe kpatara ya? N'ihi na ọ nwere ike inye aka n'ịmepụta ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ mmeghe mmeghe yana yana ntuli aka nke enwere ike ịkekọrịta ya na ndị nkuzi ndị ọzọ.
Ọ na-enyere aka na nhazi, na-enye nyocha zuru ezu iji hụ ma ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ na-alụ ọgụ na mpaghara ụfọdụ, ma na-enyekwa gị ohere ibudata nsonaazụ.
Na-enye gị ohere ịmepụta ngwa ngwa nyocha na nyocha na-enye gị usoro nghazi ngwa ngwa iji jiri anya nke uche hụ nsonaazụ nsonaazụ wee chọpụta 'ohere maka ịga n'ihu nkuzi'.
3. Ụlọ klas nke Google
Nke a bụ ezigbo ngwa dijitalụ ọzọ nwere njirimara bara uru maka ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ. Ezubere Google Classroom iji nyere ndị nkuzi aka ike, nakọtara na kaa ọrụ e dere ede na-enweghị akwụkwọ, gụnyere atụmatụ nchekwa oge dịka ikike iji aka mee nnomi nke Akwụkwọ Google maka nwa akwukwo obula.
Ọ na --emepụta folda mbanye maka ọrụ ọ bụla yana maka nwa akwụkwọ ọ bụla iji nyere aka mee ka onye ọ bụla hazie.
Nke a bụkwa ezigbo ihe nyocha nke ọma nke na-abịa na ụyọkọ atụmatụ gụnyere ikike ịhazi ya ka ọ rụọ ọrụ karịa ajụjụ 100, gosipụta akara ngosi dị ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu ma ọ bụ otu ebe ntụpọ, hazie nsonaazụ na ogidi na ọtụtụ ndị ọzọ.
ZipGrade bụ ngwa ngụkọta nke na-enyere gị aka ịlele ọtụtụ nhọrọ nyocha na nkeji. Naanị iji ekwentị gị nyochaa ule ahụ, ngwa ahụ na-emekwa ndị ọzọ.
N'ezie, ọ bụghị ihe niile gbasara akara. Ngwa a na-enye akara ule; ọ dị gị n’aka ịmata ihe ụmụ akwụkwọ ahụ chọrọ na ajụjụ ndị ị ga-akọwara ha ọzọ.
Simplezọ dị mfe ma dịkwa mfe iji mepụta ule na ule na ụmụ akwụkwọ ogige na-arụ ọrụ na njem. Ọ na-enye mpempe akwụkwọ azịza n'efu dị n'ụdị na nha dị iche iche, na-ahazi nsonaazụ grading na Excel na PDF friendly formats, hazie akara site na ụmụ akwụkwọ aha na ọtụtụ ndị ọzọ.
Showbie bụ nyiwe na-agwakọta ngwa ọrụ niile dị mkpa maka ọrụ, nkwukọrịta yana nzaghachi. Showbie nwere akwụkwọ ntuziaka dị irè yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
I nwere ike kaa akara ụmụ akwụkwọ gị na klas ha site na iji ndepụta klaasị n'ime folda Amalite Ijekọ, klas ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ dị mfe mgbe ị na-ele ya, ma tinye akara ka uru.
I nwekwara ike itinye ederede nwere isi na nzaghachi. I nwekwara otutu uzo iji tinye ihe ederede. Mana ezigbo nchekwa oge bụ ikike itinye nzaghachi ọdịyo: naanị kụrụ ndekọ!
Enwere ike ịlele ụmụ akwụkwọ akara ule site na ọrụ, klaasị ma ọ bụ na nke onye ọ bụla. N'elu ya niile, ị nwere ike mbupụ akara ule na faịlụ CVS, dịka HTML, ma ọ bụ na ndebiri email nke gụnyere faịlụ CVS agbakwunyere.
Showbie na-enye ọtụtụ nkuzi yana ngwa njikwa ụlọ akwụkwọ. Dịka onye nkuzi, ịnwere ike iji sistemụ nhazi ya mezie ọrụ ụmụ akwụkwọ wee nye ha nzaghachi ederede, anya, na nzere ozugbo.
7. Onye Ozizi Enyemaka Pro
Onye nkuzi Aide Pro gụnyere atụmatụ atọ dị mkpa: ndị na-abịa tracker, akwụkwọ akara na tebụl oche.
Akwụkwọ ọkwa ya na-akwado klas 10 maka n'efu. Tonweta atụmatụ ndị ọzọ na-efu $ 0, 99 kwa ọnwa.
Nke a bụ pro pro nke na-enye ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ yana ndị nne na nna ohere ịdebe ihe dịka ọkwa, ozi ịbịa, na ndetu. Ọ na-arụkwa ọrụ na ntanetị na ntanetị.
Enwere ike ịnwe usoro mmụta tupu ị nweta ngwa nke ngwa a, mana ozugbo ịmechara, ị ga-enwe ekele maka nhazi ya na nghọta ya.
Agbaji akara ule into oru omume, oru klas, ule, ikere òkè, ma ọ bụ nkewa ndị ọzọ, soro ndị bịaranụ ma nwete ncheta ụbọchị ọmụmụ ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ.
Ọ bụghị ngwa ngwa nghazi, mana ọ bụrụ na ị ga-echekwa ọtụtụ akwụkwọ akara na ịnwale ọ ga-adị mma ịnwe ike ịnweta ha site na ebe ọ bụla.
Ndị a bụ ngwa egwu grading 10 dị egwu na-enyere ndị nkuzi aka ịchekwa oge
Mmetụta nke Nhazi Isi na Ọganihu Ego na Nigeria
ANSU Portal Student www.coou.edu.ng 2021 Lelee Mmelite Ngwa
FUOYE - LASPOTECH Top-Up (Degree na HND Conversion) Mmemme 2019/2020
Tinye ugbu a maka ohere ohere na Transsion Holdings
UNILAG agụmakwụkwọ Kalinda 2019 | Pịa Ebe a iji lee Kalinda zuru ezu
Mmetụta Nkwukọrịta Na-enwe n’iru Mgbaru Ọsọ
BSNL SMS Ndaba ndenye ego 2021 Lee Kacha ọhụrụ na Mmelite
Tags: bestbookbook maka ndị nkuzi elementrị, afụ mpempe akwụkwọ nyocha ngwa, free afụ mpempe akwụkwọ grader, google klas grading ngwa, ngwa akwukwo maka ipad, ngwa gracam, otutu nhọrọ nyocha, igodo ngwa ngwa
« FUTO Direct Ntinye Ajuju Gara Aga 2021 & Azịza PDF Download
PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Lelee Mmelite Ngwa Ọhụrụ »